माधव नेपालको योजनाः नयाँ पार्टी गठन, चुनावमा गठबन्धन बनाएर ओलीको पत्तासाफ गराउने ! - Reel Mandu
माधव नेपालको योजनाः नयाँ पार्टी गठन, चुनावमा गठबन्धन बनाएर ओलीको पत्तासाफ गराउने !
भविष्यमा माओवादीसँग एकता गर्छाैँ, चुनावमा ओलीलाई धूलो चटाउँछौँ’
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेकपाको नाम विवादको फैसला टुंगो लगाउँदै २३ फागुनमा पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी ब्युँताएपछि वर्तमान एमालेभित्र पेलाईमा परेको माधव नेपाल समूहले नयाँ पार्टी गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । नेपाल पक्षका २ निकट कार्यकर्ताले दुई दल दर्ताको लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् । युवा नेता जीवन राई अध्यक्ष रहेको नयाँ दलको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत राखिएको छ । उनी माधव पक्षमा रहेका अनेरास्ववियूका पूर्व विद्यार्थी नेता समेत हुन् । गत वैशाख ७ गते दल दर्ताको निवेदन परेपनि दर्ता हुने क्रममा रहेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । नयाँ दल दर्ता गर्दा पार्टीको नाम ‘नेकपा एकीकृत’ र चुनाव चिन्ह ‘कलम’ प्रस्ताव गरिएको छ ।राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा वागमती प्रदेशबाट उमेदवार बनेका खिमलाल देवकोटाले कलम चिन्ह लिएर चुनाव जितेका थिए । नयाँ बन्नसक्ने पार्टीको चुनाव चिन्हलाई नै ध्यान दिएर देवकोटाले कलम चिन्ह मागेको स्रोतको दाबी छ।
पार्टीको उपाध्यक्षमा कल्पना गुरूङ र महासचिवमा विनोदकुमार खुलाललाई तोकिएको छ । त्यस्तै सचिवमा ऐन विक्रम कुँवर र कोषाध्यक्षमा सुशील खनाल छन् । आयोग उच्च स्रोतले पनि नयाँ दल दर्ताका लागि राईले केन्द्रीय समिति सहित निवेदन दिएको पुष्टि गरेको छ। यतिबेला आयोगमा पार्टीको विधान, घोषणापत्र, केन्द्रीय कमिटी बैठकका माइन्यूट, पदाधिकारीको हस्ताक्षरको सनाखत लगायतको अध्ययन भइरहेको छ । सबै प्रक्रिया पुगेको रहेछ भने आयोगको निर्णयबाट दल दर्ता हुने जनाइएको छ । राईले आफु अध्यक्ष रहेको २५ सदस्यीय कार्यसमिति सदस्य रहेको पार्टी दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिएको बताए । यस्तै नेकपा लोकतान्त्रिक पनि दर्ताको तयारीमा छ । सुदीप रुवाली अध्यक्ष र सृष्टी बराल महासचिव रहेको उक्त पार्टी निषेधाज्ञाकै बीच दर्ताका लागि गए पनि आयोगले विधान नमिलेको भन्दै फिर्ता पठाएको थियो । दल दर्ताका लागि निवेदन आएको तर त्यो प्रक्रियामै रहेको आयोगले जनाएको छ । विधानमा संशोधन गरेर बिहीबार पुनः दर्ताका लागि निवेदन दिइएको रुवालीले बताए । रुवाली माधव नेपालपक्षीय युवा संघका केन्द्रीय सदस्य हुन् । चितवनका रुवालीले सो समूहका अध्यक्ष नरेश शाही र उपाध्यक्ष नितेश पौडेललगायतसँगको सल्लाहपछि दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको बताइएको छ ।
महासचिवमा प्रस्तावित बराल भने भर्खरै एलएलबीको पढाइ सकेकी नवोदित कानून व्यवसायी हुन्। उनी भने कुनै भ्रातृ संगठनमा संलग्न नरहेको बताइएको छ । प्रस्ताविक कार्य समितिको पदाधिकारीमा उपाध्यक्ष धिरेन्द्र शाही, सचिव बासुदेव भट्टराई, कोषाध्यक्ष निर्मला कोइराला छन् । त्यस्तै सदस्यहरुमा हिरासिंह धामी, विपिन वनेम, सुशीला कर्माचार्य, सम्झना कार्की, धनबहादुर लामा, अजयकुमार पटेल, पूजा राई, दिनेशमान श्रेष्ठ, दानबहादुर थापा मगर, सुमित्रा शाह, भागिरथी पन्त सेढाई, ईश्वरी बुढाथोकीलगायत छन् । माधव नेपाल समूहका मुख्य नेताहरूको सहमतिमै संस्थागत ढंगले विधान मस्यौदा गरेर दल दर्ताका लागि निवेदन गरिएको एक सदस्यले बताए । उनीहरूले पार्टीको चुनाव चिन्ह तारा माग गरेका छन् ।
अदालतको फैसला कुर्दै नेता नेपाल – सोमबार बसेको स्थायी कमिटि बैठकले पार्टीबाट नेपाल सहित झलनाथ खनाल, भीम रावलसहितका ११ नेतालाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्काशन गरेको छ । निष्कासनमा पर्नेमा समानुपातिकबाट सांसद बनेका रामकुमारी झाँक्री,मुकुन्द न्यौपाने,कलिला खातुन,सरला यादव,पुष्पाकुमारी कर्ण,निरादेवी जैरु,पुष्पा कर्ण कायस्थ र कल्याणी खड्का समेत छन् । यस्तै ओलीले निवर्तमान सांसदहरु विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, घनश्याम भुसाल, सोमप्रसाद पाण्डे, कृष्णलाल महर्जन, झपट रावल, झलनाथ खनाल, भवानी प्रसाद खापुङ, यज्ञ सुनुवार, सुरेन्द्र पाण्डे, मेटमणि चौधरी, दिपक प्रकाश भट्ट, नारायण खतिवडालाई स्पष्टिकरण सोधेका छन् ।
नेपाल पक्षका दुई जना नेताले दल दर्ता गरेपछि नेता नेपालले आधिकारिक रुपमा दल दर्ता गरिसकेका छैनन् । खासमा नेपाल पक्ष सर्वाेच्चको फैसलासँगै एमालेमा बस्न नसकिने माइन्ड मेकप गरिसकेको थियो । जब्बर ओलीलाई तत्कालिन नेकपामा रहँदा पार्टीबाटै निष्काशन गरेका नेता नेपाललाई आफूले पनि सोही नियति भोग्नुपर्नेमा स्पष्ट रहेका थिए । नेपालनिकटका एक नेताले शिखरअनलाइनसँग भने, – ‘कमरेड माधव कुमार नेपालले चैतको शुरू मै नयाँ पार्टीको लागि तयारी गरौँ, ओली जेठ दुईमा फर्कदैनन भनेर भन्नुभएको थियो, तर हामीहरुले सकेसम्म एमाले मै बस्नुपर्छ, यतै मिहेनत गरौँ भनेर रोक्यौँ ।’ उनका अनुसार अहिले पार्टीबाट कारवाहीमा परेपनि सर्वाेच्चको फैसला कुर्ने कि भन्ने तयारी नेपाल पक्षमा छ ।
उनले थपे, – ‘हामी पार्टी गठनको प्रक्रिया भित्रभित्रै अघि बढाएका छौँ, तर सर्वाेच्चले संसद पुनःस्थापना गर्ने नगर्ने भन्ने फैसला गर्याे भने एउटा अन्यौल सकिन्छ, हामी पनि नयाँ पार्टी गठन गर्छाैँ ।’ हाल दर्ता हुन लागेका दुई पार्टीलाई मिलाएर त्यसैमा मिसिएर जाने या नयाँ नै खोल्नेबारे अझै कुरा फाइनल नभएको स्रोतको भनाई छ । विद्यमान कानूनी अड्चनका कारण नेता नेपाललाई एमाले फुटाउन सहज भएन । जसको कारण विष्णु रिजाल लगायतका नेताहरुले उनको साथ चाँडै नै छोडे । अझै पनि नेपालले ढिलाई गरे योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट जस्ता प्रभावशाली नेताहरुले साथ दिन नसक्ने कुरा पनि नेपाललाई थाहा छ । त्यसको उनलाई तत्काल पार्टी गठन गर्ने या सर्वाेच्चको फैसला कुर्ने भन्ने विषयमा समस्या भइरहेको छ । एमाले पार्टी र सूर्य चिन्हको कारण उनलाई केही नेताहरुले अझै पनि साथ छोड्न सक्ने बताइएको छ ।
चुनावमा मिलेर जाने, पछि माओवादीसँग एकता –अहिले वर्तमान सरकारविरुद्ध ५ दलीय मोर्चाबन्दी भएको छ । नेता नेपाल यही मोर्चालाई आगामी चुनावसम्म निरन्तरता दिनुपर्ने अडानमा छन् । नेपालनिकट स्रोत भन्छ, – अहिलेको मुख्य एजेन्डा भनेको असंवैधानिक काम गर्ने प्रधानमन्त्री ओली र उनको टिमलाई जसरी पनि सत्ताच्यूत गर्ने र चुनावमा पनि धुलो चटाउने, त्यसको लागि अहिलेकै गठबन्धनलाई कायम गरेर जाने हो भने चुनावमा ओलीको १० सिट पनि आउँदैन । स्रोतका अनुसार यही गठबन्धनको निरन्तरताको निम्ती माओवादी तयार रहेको छ, तर काँग्रेस भने निर्णय दिन सकेको छैन । किनकी काँग्रेसलाई एक्लै चुनाव लड्दा आउने चुनावमा पहिलो पार्टी हुनबाट कसैले पनि रोक्न सक्दैन । ‘सकेसम्म चुनावमा मिलेर जाने बरु ५० प्रतिशत सिट काँग्रेसलाई नै दिने, बाँकी हामीले लिने हाम्रो योजना छ, काँग्रेस सहमत नभए माओवादीसँग मिलेर चुनावमा जान्छौँ, र ओलीलाई धूलो चटाउँछौँ’ ।’ स्रोतले भन्यो । नेताहरुले तत्काल नयाँ पार्टी गठन गर्ने र भविष्यमा चुनावी चालमेलसँगै माओवादीसँग एकता गर्ने यो पक्षको योजना छ । तर नेताहरुले नयाँ पार्टी गठन पनि गर्ने र एमालेको महाधिवेशनपछि आउने नेतृत्वसँग मिलेर फेरी एमालेमै मिसीनुपर्ने पनि कतिपय नेताको मत छ ।